Loltoota Itoophiyaa nagaa eegsisuuf Sudaan Kibbaa jiran keessaa 15 biyyatti hin deebinu jedhan – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsLoltoota Itoophiyaa nagaa eegsisuuf Sudaan Kibbaa jiran keessaa 15 biyyatti hin deebinu jedhan
Loltoota Itoophiyaa nagaa eegsisuuf Sudaan Kibbaa jiran keessaa 15 biyyatti hin deebinu jedhan
Miseensonni loltoota Itoophiyaa nagaa eegsisuuf UN jalatti Sudaan Kibbaatti bobba’an 15 ta’an gara Itoophiyaatti deebiyuu hin barbaadnu jechuu isaanii AFPn gabaaseera.
(bbc)–Akka gabaasa kanaatti loltoota nagaa ergama nagaa eegsisuutiif Sudaan Kibbaatti bobba’an 169 ta’an kanneen biroon bakka buusuuf guyyaa kaleessaa akka gara biyyaatti deebiyaniif ture.
Miseensota nagaa eegsisuuf Sudaan Kibbaa keessaa turan keessaa 15 gara biyyaatti hin deebinu jedhan dhalattoota Tigiraay ta’uunsaanii ibsameera.
Raayyaan Ittisaa Itoophiyaa dhimmicharratti ibsa fuula Facebook isaa gubbaatti baaseen, taatee kana mirkaneessuun, kanneen kana raawwatan ergamtoota ‘TPLF’ jechuun himateera.
”Miseensonni waraanaa afaan Tigree dubbatanii fi ergamtoonni juuntaa 15 gara biyyaa hin gallu jechuun, buufata xiyyaaraa Juubaatti lafatti gangalachuuniifi iyyuun hokkara uumuuf yaalaniiru,” jedhaniiru daarektarri olaanaa Indoktirineeshinii Raayyaa Ittisa biyyaa M/J Mohaammad Tasammaa.
Miseensonni kunniniis garee nagaa eegsistootaa Motaraayizdii 15ffaa yoo tahan, kanneen miseensota haarayaan bakka bu’uuf deemaa turanidha jechuun ibsaniiru Mejar Jeneraal Mohaammad.
Gaazexaan Sudaan Post gama isaatiin loltoonni kunneen gara Itoophiyaatti deebiyuu kan hin barbaanneef tarkaanfii mootummaan naannoo Tigiraayitti “seera kabachiisuu” jechuun fudhachaa jiruun walqabatee waan isaanirra gahuu malu sodaachuun yaaddoo qabaachuu ibsuun ta’uu gabaaseera.
Dubbi himaan Mootummoota Gamtoomanii (UN) Isteefanee Duzyaakin kan eere AFPn, “Odeeffannoo guutuu argachuudhaaf yaalaa jirra. Haata’u malee, miseensonni 15 gara Itoophiyaatti deebiyuu akka hin barbaadne buufata xiyyaaraa Juubaa osoo jiranii beeksisaniiru,” jechuun isaanii gabaafameera.
Kanarraa ka’uudhaan, miseensonni raayyaa 15 kunneen akka Sudaan Kibbaa turaniif UN hayyameeraaf.
Gaazexaa Sudaan Post dabalatee sabaa himaaleen gara garaa guyyaa kaleessaa miseensonni 15 garee buufata xiyyaaraa Juubaarraa gara Itoophiyaa imalan waliin deemuu hin barbaadne walitti bu’insa keessa galanii turuu gabaasaniiru.
Loltoonni kunneen dirqamaan akka xiyyaara seenan taasifamuuf kan ture yoo ta’u, Itoophiyaa erga gahanii booda maaltu akka isaaniirra gahu yaadda’uusaanii dubbataniiru jedhameera.
Loltonni kunneen yeroo ammaa eegumsa Tajaajila Nageenyaa Biyyaalessaa Sudaan Kibbaa jala ta’uun isaanii ibsameera.
Itoophiyaan yaalii nagaa eegisisuu UN keessatti taasistuun loltoota kuma saddet gumaachuun biyyoota dursaa jiran keessaa ishee tokkodha.
Kun ammoo miseensota guutummaa addunyaarratti nagaa eegsisuuf bobba’an UN qabu keessaa harka dhibba keessaa saddetidha.
Haleellaan humna Ittisaa Itoophiyaa Iizii kaabaarra gahuu hordofee, walitti bu’insa A L I Onkoloolessa 24, 2013 mootummaa Federaalaafi humnoota TPLF gidduutti dhalateen raayyaan biyyattii aanga’oota aannoo Tigiraay bulchaa jiru aangoorraa maqsuun isaa ni yaadatama.
Kana waliin walqabatee miseensonni raayyaa miseensota TPLF jedhamaniifi yakkaan shakkaman hedduun to’annoo jala kan oolfaman yoo ta’u, akka qabamaniif kan ajajni irratti ba’ee barbaadamaa jiranis jiraachuun beekamaadha.
Lola dhalateen walqabatee namoonni lubbuusaanii dhaban lakkoofsi sirriin meeqa akka ta’e beekamuu baatus, kumootaan kan lakkaa’aman du’uu akka hin oolle ni tilmaamama.
Lola dhalate kanaan ammoo namoonni kuma 60 ol ta’an waraana baqatanii gara Sudaanitti yoo baqatan, kanneen miliyoonaan lakkaa’aman ammoo gargaarsa guyyaa guyyaan kan eeggatan ta’uu dhaabbileen gargaarsa namoomaa ni dubbatu.
Duulli waraanaa naannoo Tigiraayitti taasifame xumuramuu isaa erga mootummaatiin ibsamee booda qaamonni gargaarsa namoomaadha dhiyeessan naannichatti bakka gara garaatti socho’anii gargaarsa akka dhiyeessaniif UN mootummaa waliin waliigalteerra gahuun isaa ni yadtama.
Haata’u malee, lakkoofsi namoota gargaarsa barbaadanii “baayyee guddaa” ta’uu isaa Waldaan Fannoo Diimaa akeekkachiiseera.
Ethiopia: እስር ቤት ያሉ ፖለቲከኞች ለምርጫ ዕጩ ሆነው መቅረብ አይችሉም
በመንግስት የተዘጉ የኦነግ ጽ/ቤቶች